Ndedzipi nzira dzekutakura dzaunoshandisa?
Isu tinoshandisa Royal Mail yeVatengi vekunze uye yeUK vatengi, Royal Mail uye DPD.
Ini handina kugamuchira chinongedzo chekutevera, parcel yangu iripi?
Iwe unofanirwa kunge wagamuchira yekutevera nhamba mune yako yekutumira yekusimbisa email. Zvichienderana nekuti ndeipi nzira yaunosarudza yekutakura, unozokwanisa kushandisa nhamba iyi mu
DPD yekutevera chinongedzo - https://www.dpd.co.uk/service/
Royal Mail yekutevera link - https://www.royalmail.com/track-your-item#/
Chii chandinofanira kuita kana chinhu changu chisati chaunzwa zvakadaro?
Yako inofungidzirwa dhirivhari zuva iri muOrder Confirmation email - ndokumbira utendere kusvikira rino zuva rekuti odha yako isvike.
Iwe uchave unokwanisa kuwana izvo zvazvino kugadzirisa pane yako odha nekudzvanya iyo yekutevera link mune yako yekutumira yekusimbisa email. Neimwe nzira, iwe unogona kupinda mu 'Akaunti Yangu' uye tinya 'Tevera Iyi Order'.
Yako yekutevera link inokwanisa kupa ruzivo rwechizvino pamusoro pechimiro cheodha yako.
Kana zuva rako rekufungidzira rapfuura uye usati wagamuchira odha yako, ndokumbirawo ubate ne sales@sarmsstore.co.uk
Ini ndinogona kuteedzera kuendesa kweangu odha?
Kana odha yako yakatumirwa kwauri uchishandisa seinoteedzera sevhisi, unogona kutevedzera rwendo rwayo kwauri. Iwe uchagamuchira email yekutendesa tsamba kubva kudura redu kana odha yako yave munzira; ingo nyora pane yako yekutevera link pane ino email kuti uone iyo yazvino kuteedzera.
Ndingaite here kuti pasuru yangu iendeswe kune imwe kero?
Nekuchengetedza kwako isu hatisi kukwanisa kuchinja kero yako yauri kutumirwa. Usatombo kendenga - kana usiri mukati apo kuendesa kunoedzwa vedu vatinotakura navo vachasiya kadhi rinopa zano rekuti ungaronga sei kuendesa zvakare kana kwaunogona kutora pasuru yako.
Chii chinoitika kana ndisiri mukati kana odha yangu ichisvika?
Mumwe munhu anofanirwa kunge ari mukati apo pasuru yako inenge yafanirwa kuendeswa sezvo isu tingangoda siginecha. Nekudaro, usazvidya moyo kana izvi zvisingaite sezvo shamwari yedu yekuendesa inowanzoedza kuendesa kanopfuura kamwe chete.
Neimwe nzira ivo vanosiya kadhi rinosimbisa kuti vanga vasiya nemuvakidzani, vorisiya munzvimbo yakachengeteka, pavachaedza kuendesa zvakare kana kukupa ruzivo rwekuti ungatora sei.
Yangu odha mamiriro anoti "isina kuzadzikiswa" nei isati yatumirwa nazvino?
Kana chimiro cheodha yako chiri kuratidza sekuti 'hachina kuzadzikiswa,' zvinoreva kuti tiri mubishi kugadzirira odha yako pamwechete kuti igotumirwa.
Munguva dzakabatikana, chinzvimbo ichi chinogona kuratidza pane yako odha kwenguva yakareba kupfuura zvakajairwa. Yako inofungidzirwa zuva rekutumira iri pane yako odhi yekusimbisa email uye inosanganisira iyo nguva inotora kwatiri kuti tihodhi yako odha.
Iwe unogashira imwe email patinotumira odha yako kwauri, iyo inosanganisira yekutevera chinongedzo kana odha yako yatumirwa neimwe yeedu anoteedzerwa ekuendesa masevhisi
Ko kurongedza kwako kunoita sei?
Isu tinoona kuti edu ese ekupakata akangwara, pasina zvitambi zvinotaura zita rekambani uye zvakapetwa zvakaputirwa.
Ini ndinogona kugadzirisa odha yangu mushure mekunge ndaiisa?
Tiri kukurumidza chaizvo kurongedza odha yako, zvinoreva kuti tinotadza kushandura odha yako kana waita. Izvi zvinosanganisira kushandura sarudzo yekuendesa, kero yekuendesa kana zvigadzirwa muhurongwa.
Ini ndaraira chinhu netsaona, ndoitei?
Sezvo isu tisingakwanise kuchinja odhiyo kana iwe waiisa, uye wagamuchira chinhu chausingade. Ndokumbira utizivise pane sales@sarmsstore.co.uk. Unogona kuidzosera kwatiri, uye isu tinodzoreredza kana kuchinjana odha yako nekukurumidza painongodzoka kudura redu.
Ndokumbirawo muise katsamba muchikamu chenyu muchitizivisa kuti makaisa odha zvisirizvo kana muchidzosera. Kumbira humbowo hwechipo uye uve nechokwadi chekuti unochengeta zvakachengeteka kuitira kana tikazoda kuzvitarisa gare gare.
Ndine chinhu chisina kururama muodha yangu, chii chandinoita?
Tinoda kugadzirisa chero nyaya nezvinhu zvisiri izvo.
Kana chimwe chezvinhu zvawakagamuchira zvisiri izvo zvawakaraira, ndokumbira utizivise pane sales@sarmsstore.co.uk, uye isu tinokutumira iwe chako chakakodzera chinhu nekukurumidza sezvazvinogona. Isu taizokumbira kuti iwe utitumire isu kumashure izvo zvisiri izvo chinhu.
Ndokumbirawo muise katsamba muchikamu chenyu muchitizivisa kuti hazvina kunaka kana muchizvitumira. Kumbira humbowo hwechipo uye uve nechokwadi chekuti unochengeta zvakachengeteka kuitira kana tikazoda kuzvitarisa gare gare.
Ndiri kushaya chinhu muodha yangu, ndoitei?
Kana paine chinhu chirikushaikwa, ndapota taura nesu ku sales@sarmsstore.co.uk nenhamba yekuodha uye zita rechinhu chisipo. Isu tichagadzirisa nyaya yacho iwe nekukurumidza sezvatinogona.
Ndingaite sei kutsvaga zvinhu pawebhusaiti?
Unoziva here kuti chii chauri kutsvaga? Kana zvirizvo, zvinyora mubhokisi rekutsvaga riri pamusoro peji roga roga wobva wadzvanya pagirazi rinokudza zvinhu.
Unogona kundipa rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvako?
Isu tinoedza kukupa iwe seinobatsira ruzivo rwakawanda sezvatinogona nezve zvese zvigadzirwa zvedu, zvinosanganisira:
Zvitupa zvekuongorora kubva kune wechitatu-bato sosi.
General tsananguro yechigadzirwa
Mashandisiro ekushandisa chigadzirwa - chinosanganisira kutenderera kureba, kuyerwa kwevarume nevakadzi, uye chigadzirwa hafu yeupenyu.
Chii chekuchaisa nacho
Kana iwe uchida PCT nechigadzirwa ichi.
Iwe uchave uri kuwana zvimwe zvigadzirwa?
Tiri kuyedza kugadzirisa renji yedu nezvigadzirwa zvitsva kazhinji sezvatingagona, zvinoreva kuti tinoshandisa nguva yakawanda kuyedza kugadzirisa zvigadzirwa zvitsva, saka chengetedza maziso ako!
Iwe unopa chidimbu chakazara pakutenga zvakawanda?
Vedu vekuparadzira ekuvaka maLab ari kutsvaga vatengesi. Ndokumbira kuti uone https://bodybuiltlabs.co.uk/a/wsg/proxy/signup mamwe mashoko.
Ndinoziva sei kuti zvigadzirwa zvako zviri pamutemo?
KuSarmsStore, isu tinongogadzira zvigadzirwa zvechokwadi uye zviri pamutemo, hatitengesi fakes, saka unogona kuva nechokwadi chekuti chinhu chawakagamuchira ndechechokwadi. Isu tine yechitatu-bato maabhu mhedzisiro ayo anogona kuwanikwa pane yedu webhusaiti, pane iro chigadzirwa peji mune yemufananidzo chikamu.
Nekudaro, kana usiri kunyatsofara nechinhu chako, unogamuchirwa kuti uidzorere kwatiri kuti uwane mari izere, chero bedzi chigadzirwa chisina kuvhurwa.
Zvigadzirwa zvako zviri pamutemo here?
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoedzwa kuitira kuchena uye mhedzisiro inogona kuwanikwa pane webhusaiti yedu. Akabatanidzwa pano: https://sarmsstore.co.uk/
Zvigadzirwa zvako zvinoshanda here?
Isu tiri mutengesi mukuru weSARM muEurope zvigadzirwa zvedu ndezvekuchena kwakanyanya kwaungawana. Wedu ongororo pane yedu webhusaiti, Trust Pilot uye maforamu anofanirwa kukupa iwe chivimbo.
Kudzoka uye Mari
Iwe unodzorera mari yekuendesa kana ndikadzorera chimwe chinhu?
Chii chandinofanira kuita kana mari yangu yekudzorera isiriyo?
Tine urombo chaizvo kana takanganisa nekutidzorera!
Kana izvi zviri izvo ndapota taura nesu tichishandisa sales@sarmsstore.co.uk uye isu tichaedza uye nekuzvigadzirira iwe nekukurumidza sezvazvinogona.
Sei ndisati ndatambira mari yangu futi?
iwer kudzoreredza kunogona kutora pakati pe5-10 mazuva ekushanda kuti uite muakaunti yako kana zvangoitwa. Ndokumbira umirire iyi yakapihwa nguva usati waonana nesu.
Ndiri mutengi weUK, wagamuchira zvinhu zvangu zvadzorerwa?
Inogona kutora kusvika kumazuva manomwe ekushanda (kusasanganisira kupera kwevhiki uye zororo rebhangi) kubva pazuva rakatevera zuva rekudzoka kwako, kuti pasuru yako idzorerwe kudura redu uye igadziriswe.
Tinokutumira email kana tangogamuchira yako kudzoka, tichikuzivisa iwe nezve anotevera matanho.
Isu tinovimba iwe unoda chako kutenga kubva kuSarmsStore. Nekudaro, kana usiri kufara nekutenga kwako, kana ikasasangana nezvaunoda, unogona kuzvidzorera kwatiri.
Zvinhu zvinofanirwa kudzoserwa mumamiriro azvo epakutanga uye zvisina kuvhurwa, mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva rawakatambira. Tinogona kupa kudzorerwa kuzere pamutengo wawakabhadhara.
Kana iwe uri kudzorera chigadzirwa kwatiri nekuti hachisi icho, isu tinongodzosera yako yekubhadharisa mitengo kana chinhu chacho chisina kunaka kuburikidza nekanganiso padivi redu uye kwete kana icho chigadzirwa chakarairwa zvisizvo newe.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kudzoka kwedu, ndapota tarisa peji redu: https://sarmsstore.co.uk/pages/refund-policy
Ini ndinogona kubhadhara ndichishandisa PayPal?
Parizvino hatigamuchire Paypal kuburikidza newebsite yedu.
Ndeapi marudzi ekubhadhara aunogamuchira?
Isu tinogamuchira ese makuru makadhi echikwereti uye echikwereti, pamwe ne bitcoin.
Ini ndinogona kubhadhara kana ndikawana chigadzirwa?
Kubhadhara kwacho kuchatorwa kubva kuaccount yako panguva yaunoisa odha yako.
Nei kodhi yekubvisa isiri kushanda?
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti mapinza kodhi yekudzora nenzira kwayo muchikamu chekudzikisira, munofanira kuona iyo dhisikaundi inowedzera kuodha yenyu kana yaiswa nemazvo.
Marii yandinofanira kubhadhara yekutakura?
Isu tinopa zvemahara kutumira kwenyika. Isu tinopa sevhisi yakabhadharwa iyo, zvinoenderana nemari yenyika yako inobvumidzwa uye zvinorambidzwa, inovimbisa pasuru yako kuendeswa nekukurumidza.